मिथिला परिक्रमाको पराक्रमले होली महोत्सवसम्मको यात्रा……. - Janakpur Today
मिथिला परिक्रमाको पराक्रमले होली महोत्सवसम्मको यात्रा…….
परापूर्वकालदेखि नै मिथिलाञ्चलको भूमी ऋषी–मुनी र साधुसन्तको लागि तपस्यास्थलको रुपमा रही आएको छ । यस पवित्र भूमीमा अष्टावक्र जस्ता सांख्योगी, राजर्षी जनक जस्ता कर्मयोगीको जन्म भएका छन् । जसले आफ्नो योग बलले अनेकौँ बुद्ध पुरुष और बुद्धत्वका पिपासु जिज्ञासुलाई आफ्नो अन्र्तपथमा हिड्न मार्गदर्शन गरेका छन् । राजर्षी जनक छोरी सिताको विवाहोत्सवको स्वयंवरमा धनुषयज्ञको बहानामा यस पवित्र भूमीमा त्यस समयका लगभग सबै ऋषी–मुनी, साधु–सन्तहरु लाई एक साथ आमन्त्रण गरि महाकुम्भ मेला लगाउनु भएका थिए । जसले गर्दा यस मिथिलाको भूमी झन्–झन् पवित्र हुदै गयो । अहिले पनि जनकपुरधामको रुपरेखा अनादी कालको आध्यात्मिक तपस्थली (आश्रम) को झल्को दिईरहेका छन् । जहाँ अनन्त ताल–तलैया, मठ–मन्दिर र राज्यको चारै तर्फ नदी–नाला आदी अनेकौ स्मृति प्रमाणको रुपमा आज पनि जिवित छन् ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने मिथिला राज्यको चारकिला ः पूर्वमा कोशी नदी, दक्षिण पश्चिममा गंगा नदी, उत्तर दिशामा कमला नदी र पहाडको भूभाग सम्म फैलिएको थियो । यस राज्यमा अष्टावक्र, बुद्ध, महाविर, राजर्षी जनक, कपिल, कनात, याज्ञवल्कय, गार्गी र मैत्रेय जस्ता अनेकौँ बुद्ध पुरुषहरुले आ–आफ्नो ज्ञान को ज्योती फैलाएका हुन् । जसले गर्दा बहुसँख्य मानिसहरुले आफ्नो आत्मामा विराजमान परमात्माको सक्षात दर्शन गरि सोमरस रुपी प्रसादको स्वाँद चाख्ने सौभाग्य पाएर स्वयंलाई धन–धान्य महसुस गरे । त्यही उर्जाले अहिले पनि हामी सबैलाई आ–आफ्नो जिवनमा मुक्ती र सफलताको तर्फ अगाडि बढ्नमा मद्दत पु¥याईरहेको छ । यस पवित्र भूमीलाई विश्व स्तरमा आध्यात्मिक नेतृत्व गर्नका लागि मार्गदर्शन गरिरहेका छन् ।
विगतका सबै बुद्धपुरुष दृष्टा एक अर्थमा अधुरा थिए । किनभने जुरनुु, रुचनु र पच्नु सबैको सौभाग्यमा हुदैन । वहाँहरु सबैले आफ्नो भित्रका अन्नत शान्तिको खजाना प्राप्त गरि सकेका थिए, र त्यो खजानालाई आम मानव समुदायमा फैलाउन धेरै कोसिस पनि गरेका नै हुन । वहाँहरु सँग शान्तिको सन्देशलाई धेरै भन्दा धेरै जनमानस सम्म पु¥याउन भरपूर श्रोत साधनको अभाव थियो । अष्टावक्र, जनक, बुद्ध, महाबिर, कबिर जस्ता बुद्धपुरुष आफ्नो सामथ्र्यले जहाँ–जहाँसम्म जान भ्याऐ, त्यहाँ–त्यहाँसम्म आफ्नो सन्देशलाई फैलाए । सोही कारणले वहाँहरुको शान्तिको सन्देश मिथिला भूमी सम्म नै सिमित रहन पुग्यो । यसका लागि पनि वहाँहरुले अनेकौ दुःख पिडा भोग्नु प¥यो । किनकि धर्मका ठेकेदार र त्यसको दलालले कहिल्यै पनि कसैलाई आफ्नो खुट्टामा खडा हुन दिन चाहदैनन् । सदैव अरुको बैशाखी बनेर बस्न रुचाउँ छन् । त्यही बैशाखी बेचनको लागी आफ्नो खुद्रा पसल थापेर रोजी–रोटीको उपाय गर्न मैं तल्लीन हुन्छन् । तर सन्तले सदैव आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दथे । वहाँहरु भन्नु हुन्छ,–“तिमीहरु आपनो खुट्टामा हिडन सिक, जसले गर्दा हिडनको लागी कसैको सहाराको जरुरी नपरोस, अन्तमा, मेरो पनी ।” यही अभिव्यक्तीको भिन्नताका कारण आजसम्म साधु–सन्त र धर्मका ठेकेदार तथा त्यसका दलालहरु कहिल्यै पनि एक साथ हुन पाएनन् ।
राजर्षी जनकको समय अधिकाशं साधक गृहस्थ हुन्थ्यो । त्यसका लागि आफ्नो घर–परिवारमा रहेर र आफ्नो घर–परिवार छाडेर आफ्नो अन्र्तयात्रा गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो । यसका लागि गृहस्थ साधक आफ्नो व्यस्त दिनाचर्याबाट केही समय हप्ता, दुई हप्ता, महिना, दुई महिना र तिन महिना निकालेर आफ्नो अन्तस्थलको भित्र त्यो परमानन्दमा डुबकी लगाउन चाहन्थे । यो उनको सदगुरुको निर्देशन पनि थियो । यस क्रममा राजा जनक १५ दिनको साधना शिविर आयोजन गरी राख्नु हुन्थ्यो । जसमा आफ्नो साधकहरुलाई विभिन्न स्थान लगेर साधनाको अत्यन्त गहिराईमा पु¥याउने कोसिस गरी राख्नु हुन्थ्यो । त्यस स्थानमा नयाँ–नयाँ मानिसहरुलाई सत्यको बाटोमा हिड्नका लागि उत्पे्ररित गरी राख्नु हुन्थ्यो ।
कुनै काम एक्लै गर्नुभन्दा समूहमा गर्नाले उपलब्धि सहज र सरल हुन जान्छन् । किनभने सबैजनाको यात्रा एकै दिशामा हुने हुनाले कम सामथ्र्य भएको व्यक्तिको यात्रा पनि सफल हुन जान्छ । जुन की केही मानिसको लागि एक्लै यात्रा गर्न कठिन मात्रै नभई असम्भव पनि हुन्छ । जस्तै २५–३० व्यक्तिको समूहमा नदी पार गर्न गयो भने एक दुई जना कम पौडन सक्नेले पनि सबैजनाको सहयोगले नदी पार गरिहाल्छन् । अर्को कुरा ः हामी जस्तो स्थानमा हुन्छौँ, त्यस्तै उर्जा हामीलाई आकर्षित गरिरहन्छन् । जतिसुकै पनि कामुक अशान्त व्यक्ति होस्, मन्दिर, मस्जिदमा जाने बित्तिकै केही समयको लागि भएपनि शान्ती महसूस गर्छन । त्यस्तै जतिसुकै ठुलो ब्रहमचारी साधक होस्, यदि वेश्यालय र मदिरालयको नजिकबाट जाने बेला केही समयका लागि भएपनि कामुक महसूस गर्छन । यसलाई आध्यात्मिक भाषामा आभामंडल (औरा) भनिन्छन् । बुद्धले आफ्नो दश हजार भिक्षु सँग एक साथ यात्रा गर्ने गर्दथे । जब बुद्ध दश हजार भिक्षु सँग एक साथ कुनै ठाउँ पुग्दथे त्यस ठाउँ लगायत आसपासको स्थानमा शान्तिको माहोल कायम हुन्थ्यो ।
जसले आफ्नो दिनचर्यामा १५ दिनको समय एक साथ निकाल्न सक्दैनन् । त्यो सबैजना परिक्रमाको अन्तिम दिन जनकपुरधामको अन्र्तगृह परिक्रमामा १५ दिनको साधना शिविर पूरा गरि आएका साधकहरुसँग परिक्रमामा सहभागी भई अर्को दिन उनीहरु सँग होली खेली त्यो आनन्दको स्वाँद चाख्ने कोसिस गर्दछन् । जुन उनीहरु सबैजनाले १५ दिनको कठिन साधनाबाट हासिल गरेका हुन्छन्, केही व्यक्तिको पन्ध्र दिनको कठिन साधनाबाट उपलब्ध उपलब्धि केही व्यक्तिले एकै दिनमा उपलब्ध गर्दछन् । यसका लागि उसको पूर्वजन्मको संचित साधना र यस जन्मको विवेकपूर्ण समझदारी पूर्वकको यात्रा सहायक हुन्छ । यस अन्र्तगृह परिक्रमामा पनि ठाउँ–ठाउँमा रुकेर आफूलाई साँक्षी पूर्व हेर्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ । जस मध्ये केही ठाँउ आज मन्दिरको रुप लिएको छ । जुन किसिमले १५ दिनको साधना शिविरको साधक प्रति दिन गर्दथे, त्यो सबै प्रक्रिया अन्र्तगृह परिक्रमामा बिहान ध्यान पछि परिक्रमामा आफ्नो बाँया खुट्टा उठाउने बेला भित्र जाने श्वाँस र खुट्टा जमिनमा राख्ने बेला बाहिर निस्किने श्वाँसमा ध्यान जारी राख्छन् । हिड्दा–हिड्दै केही समय पछि रुक्नका लागि बनाइएको स्थानमा स्वयंलाई साक्षी भाव कायम राख्दै अन्र्तगृह परिक्रमा पुरा गरिन्छन् । साँझ किर्तन पुजा–पाठ र ध्यान र विश्राम गरि अर्को दिन सोही साधकको साथ होली मनाई आफुलाई आध्यात्मिक रुपले ताजा गर्दै साधनामा नयाँ संकल्पले जोश जाँगरको साथ पुनः प्रति दिन साधनामा जुटिन्छन् ।
त्रेता युगमा दैत्यका राजा हिरण्यकश्यपुका भाई हिरण्याक्षले ऋषी–मुनी, साधु–सन्त र देवी देवतालाई व्यापक उपद्रब गरिरहेका थिए । जब कुनै मानिस सत्यको खोजीमा निस्किन्थे तब संसारका सबै किसिमका राक्षष उसको विरुद्धमा खडा हुन्थ्यो । तर भगवानले सदैव सत्यको पिपासुलाई मार्गदर्शनको साथै संरक्षण गरिरहन्थे । भगवान बिष्णुले बराह अवतार लिएर हिरण्याक्षको बध गरे । हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णुलाई आफ्नो भाईको मृत्युको बदला लिन लाई भगवान शिवको तपस्यामा तल्लिन भऐ । तपस्याले मानिस कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न सक्छन् । तर यो पनि होईन कि संसारको सबै व्यक्ति परम सत्य सम्बोधी कै लागि तपस्या गर्ने गर्छन् । प्रायः व्यक्ति संसारी क्षँणभँगुर चिज पाउनकै लागि देवीदेवताको उपाषना अराधना लगायत भगवानको तपस्या गर्ने गर्छन । जुन कि संसारी रुपले पाउन असम्भव लाग्छ । त्यसका लागि अलौकिक शक्तिका सहारा लिनका लागि पुग्छन् । तर अस्तित्वको लिला अपरम्पार छन् । मानिस आाफ्नो गहरी निष्ठा र दृढ संकल्पले जे पाउन चाहन्छन, एक न एक दिन पाइ नै हाल्छ । यदि कसैले प्रयासको बाबजुद पनी अफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको भएमा, त्यस व्यक्तिको भरपुर प्रयासमा नै कमी हुन सक्छन् । हिरण्यकश्यपुले सात वर्षको आफ्नो कठिन तपस्याले भगवान शिवबाट अमरताका बरदान प्राप्त गरे । मानिस जुन प्रयासले आफ्नो सुनौलो भाग्य निर्माण गर्न सक्छन्, दुर्भाग्यवश त्यही अहंकारले आफ्नो बिनास गर्न पुग्छन् । यो सात वर्षको कठिन साधनाले हिरण्यकश्यपु परमात्मालाई पाएर आवागमनबाट मुक्त हुन सक्थे । तर उनले आफ्नो शर्मनाक मृत्युको ढोका खोले । जब हिरण्यकश्यपु तपस्याका लागि निस्के, त्यस बेला उसको पत्नी कयाधु गर्भवती थिईन् । कयाधु दैत्यका राजा जम्भकी छोरी थिईन् । त्यो बच्चा जन्मने बित्तिकै इन्द्रले मार्न चाहन्थे । नारद कयाधुलाई बचाएर आफ्नो आश्रममा लिएर गए । जब हिरण्यकश्यपु तपस्याबाट फर्के तब उनको छोरा प्रल्हाद सात वर्षको भईसकेका थिए । प्रल्हाद आफ्नी आमाको गर्भदेखि सात वर्षको उमेर सम्म नारदको छत्रछाँयामा भगवान विष्णुको भक्तिमा हुर्के बढे र सानो उमेरमै संबोधी प्राप्त गरिसके । मनोवैज्ञानिकका अनुसार बच्चा तिन वर्षको उमेरमा ७० प्रतिशत चिज सिकिहाल्छन्, बाँकी जीवनभरिमा मात्रै ३० प्रतिशत सिक्छन् ।
जब हिरण्यकश्यपुले अमरताको बरदान प्राप्त गरि आफ्नो घर फर्के तब स्वयंलाई भगवान घोषणा गरिहाले । आफ्नो छोरा प्रल्हाद सँग आफु भगवान भएको साक्षी लिन खोजे । तर उनले जतिसुकै फकाए पनि प्रल्हादले भगवान विष्णु बाहेक आफ्नो बुवालाई भगवान मान्न अस्वीकार गरिनै रहे । हिरण्यकाश्यपु आफ्नो गुरु शुक्राचार्यका छोरा शंद र अमर्कलाई आफ्नो कुरा मनाउनका लागि आदेश दिए । शंद र अमर्क प्रल्हादलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको शिक्षा दिए पनि आफ्नो कोसिसमा असफल नै रहे । हिरण्यकश्यपु आफ्नो सबै प्रयासको असफलताले अन्त्यमा प्रल्हादलाई मार्नु नै उचित सम्झे । जसका लागि नानाथरीको उपाय अपनाए । ठुलो भन्दा ठुलो पहाडबाट तल नदीमा खसाईदिने, पागल जंगली हात्तीबाट कुल्चिन लगाईदिने, विष खुवाईदिने आदी जस्ता प्रयास असफल भएपछि अन्त्यमा आगोबाट नजल्ने बरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकाको काँखमा राखेर आगोमा जलाएर खरानी गरिदिन आज्ञा दिए । “जा को राखे साइया मार सके न कोई” जसको रक्षक स्वयं दुनियाको बनाउने बाला भगवान हुन्छन्, त्यसलाई दुनिया को मान्छेले के नै गर्न सक्छन् र ? अन्ततः आगोमा होलिका स्वयं जलेर खरानी भई हालिन्, तर पनि प्रल्हाद सुरक्षित नै रहे । होलिका हाम्रो काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारको प्रतिक हो । जब साधक आफ्नो साधना रुपी आगोबाट आफ्नो काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार रुपी होलिकालाई भष्म गरिदिन्छन्, तब साधक प्रल्हाद जस्तो सम्बोधीको अवस्था प्राप्त गर्दछन् । यहाँ प्रल्हाद संबोधी, समाधी र निर्वाण अवस्थाका प्रतीक हुन ।
परिक्रमा साधना र होली समाधीको अवस्था हो । बाहिरी होलीको रङ्ग केही क्षणका लागि मात्र रहन्छ । तर भित्रको होलीको रङ्ग मानिस सँग जीवन उपरान्त सधै रहिरहन्छ । होलीमा रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो, निलो आदी रङ्ग प्रयोग गरिन्छ । रातो साहसको, सेतो पवित्रताको, पहेँलो आनन्दको, हरियो पे्रमको र निलोलाई शान्तिको प्रतिक मानिन्छ । जसलाई आफ्नो भित्रको परमात्मा सँग होली खेल्ने शौभाग्य प्राप्त भईसकेको छ, त्यसका लागि कुनै खास दिनको पर्खाई हुदैन । त्यसको जिन्दगीको प्रत्येक एक क्षण होली हुन्छ । जतिखेर फुर्सद हुन्छ केही क्षणका लागि आँखा बन्द गरि आफ्नो भित्रको दिव्य आलोकमा डुबकी लगाई रहन्छन् । त्यो व्यक्ति सदैव पवित्रता, साहस, पे्रम, आनन्द र शान्तिमा बहिरहन्छन् । प्राचिनकालमा यही सन्देश कथाको माध्यमले जनमानसमा प्रसारित गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
लेखक “जिवन दर्शन” आध्यात्मिक जन–जागरण अभियानको आध्यात्मिक अभियन्ता हुन् ।
मलेठ घट्ना छानबिन समिति बनेको डेढ् बर्ष, प्रतिवेदन अझै आएन